UMnyango wezamaJele obishini ngemuva kokusabalala kwevidiyo yocansi | Scrolla Izindaba
UMnyango wezamaJele obishini ngemuva kokusabalala kwevidiyo yocansi
UMnyango Wezokuhlunyeleliswa Kwezimilo ushaywe uvalo ngokusemthethweni, unamahloni futhi uyazinyeza.
Kulabo abangenasiqiniseko, okhulumela uMnyango uSingabakho Nxumalo uqonde ngqo.
“Ukwenza ucansi phakathi kweziboshwa nezikhulu zokuhlunyeleliswa kwezimilo kuyizigameko ezihlazisayo ezingasoze zachazwa njengalokho okulindeleke ezikhulwini zethu,” esho.
Ividiyo akhuluma ngayo icace bha.
Isiboshwa sifake into yokuqopha egumbini kanti no-warder obegqoke iyunifomu kuyacaca ukuthi naye uyazi ngale nto.
Kule vidiyo, isiboshwa nonogada weziboshwa wesifazane babonakala bethintana futhi beqabulana ngaphambi kokuba lo wesifazane, esizwa yisithandwa sakhe, eqaqa izinkinobho futhi ekhumula ibhulukwe elehlisela ezansi.
Ngaphandle kokusebenzisa ijazi lomkhwenyana .
Ekugcineni, owesilisa ugqoka iyunifomu yasejele ewolintshi uzisula ngesicubu esimhlophe ngaphambi kokumqabula avalelise bese ethatha into yakhe aqopha ngayo.
Esitatimendeni esikhishwe ngoLwesibili, uNxumalo uthe umnyango uthathela izinyathelo ezinqala isikhulu sezokuhlunyeleliswa kwezimilo ngesenzo socansi okusolakala ukuthi ubesenza nalesi siboshwa.
“Ividiyo enezigameko zezinsolo zocansi phakathi kwesikhulu nesiboshwa e-Ncome Correctional Centre, e-KZN, ishiye uMnyango ushaqekile, unamahloni futhi uqulekile,” kusho uNxumalo.
“Isikhulu esithintekayo sesitholakele futhi sizoqondiswa izigwegwe ngokushesha. Kuthathwe nezindlela zokuqondiswa kwezigwegwe kulesi siboshwa.”
Uthe abaphathi bezokuhlunyeleliswa kwezimilo kulindeleke ukuthi bathobele imigomo yokuziphatha, futhi izenzo ezinyanyekayo zocansi neziboshwa azisoze zabekezelelwa.
Unxuse labo abanevidiyo ukuthi bayeke ukuyithumela.
NgoMasingana, umnyango wathi ufaka izikena zomzimba ezikhungweni zokuhlunyeleliswa kwezimilo ezihlonziwe ngaphakathi kwezindawo eziyisithupha zokuphatha ngenhloso yokunqanda ukushushumbisa.
UNgqongqoshe Wezobulungiswa Nokuhlunyeleliswa Kwezimilo uRonald Lamola uthe izikena zemizimba zafakwa ngemuva kokubanjwa kwesikhulu e-St Albans Correctional Centre e-Eastern Cape sishushumbisa izinto ezingekho emthethweni.